Jacaylkii Ka Bilaawday Facebook Ee Ku Dhammaaday Dilkii Arxan Darrada Ahaa - Aayaha
Home ARIMAHA BULSHADA Jacaylkii Ka Bilaawday Facebook Ee Ku Dhammaaday Dilkii Arxan Darrada Ahaa
Boliiska degmada Kiambu ee dalka Kenya, ayaa xiray nin 26 jir oo la sheegay inuu Arbacadii dilay gabar uu ka dhexeeyay xiriir jacayl.
Tairus Mwangi, oo ah waardiye xabsi ku yaala deegaanka Malindi, ayaa la sheegay inuu si xun u jir dilay xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray Purity Karwirwa, iyadoona la sheegay inuu Buris uga garaacay madaxa, sanka iyo dhabarka.
Mwangi iyo xaaskiisa uu dilay oo 26 sano jir ahayd ayaa isla haasaawayay sanad iyo bar, waxana xiriirkooda oo ka bilaawday Facebook, uu daris la noqday muran aanan dhammaad lahayn, sida uu K24, u sheegay Erick Kimathi, oo ah walaalka gabadha la dilay.
Kimathi, ayaa sheegay in walaashiis oo nolosheeda ka maareyn jirtay qoraallo dhanka internet-ka ah ay intabadan jacaylkeeda ku booqan jirtay goobtiisa shaqada.
Waxa uu sheegay in xiriirka labada lamaane uu ahaa mid uu jir dil ka buuxay, isagoona sheegay in eedeeysanaha uu intabadan ahaa mid dagaal badan.
Sida laga soo xigtay walaalka gabadha geeriyootay – Karwirwa waxay joogtay goob ay saaxiibteed leedahay oo ku taala Donholm, Nairobi.
Skitter Ntinyari, oo saaxiib la ahayd gabadha geeriyootay isla markaana ay la joogi jirtay, ayaa u sheegtay K24 Digital in markasta oo Karwirwa ay telefoonka kula hadli jirtay gacaliyaheeda, ay maqli jirtay murankooda.
Waxay sheegtay inay yareyd in iyagoo aanan murmin ay sheeko dhammeystaan.
Mwangi ayaa la sheegay in Talaadadii, 25-kii Febraayo, uu tegay Nairobi isla markaana uu Karwirwa weydiiyay bal inuu la kulmi karo iyada si ay u dhammeeyaan khilaafaadkooda.
Karwirwa ayaa gacaliyaheeda ka aqbashay codsigaas. Mwangi ayaa intaas kadib Karwirwa, kasoo watay guriga saaxiibteed.
Waxaa la sheegay in Mwangi, intaas ka dib, uu Karwirwa geeyey guriga walaashiis oo ku yaala degmada Ruaka, halkaas oo ay mar kale ku murmeen – Arbacadii, 26-kii Febraayo.
Mwangi ayaa intaas kadib la sheegay inuu soo qabsaday dubbe oo uu Karwirwa kaga dhuftay madaxa, sanka iyo dhabarka, oo isla goobta uu ku dilay.
Walaalka gabadha geeriyootay ayaa sheegay in eedeeysanaha uu shan jeer Dubbaha ku dhuftay Karwirwa.
Kaamirooyinka CCTV, ee goobta ku xirnaa ayaa soo bandhigay gacan ku dhiiglaha oo wax yar kadib ka tagaya guriga kadib markii uu dharka iska bedelay.
Eedeysanaha walaashiis oo guriga imaatay habeenkii Arbacada, ayaa aad u naxday markii ay aragtay meydka Karwirwa oo dhex yaallo dhiig farabadan.
Waxay dhacdadaan ku wargelisay saldhigga boliiska Karuri, taasoo keentay in labada galo eedeysanaha oo u baxsaday meel aanan la garaneyn.
Baarayaasha DCI, oo daba galay tilmaamaha taleefanka eedeeysanaha ayaa kahmiistii 27-kii Febraayo, ku qabtay baar ku yaala Kahawa West. Mwangi ayaa lagu xiray saldhigga boliiska Karuri.
Baaritaano lagu sameeyay meydka Karwirwa, ayaa soo bandhigay inay u geeriyootay dhaawacyo dhanka madaxa ah.
Previous articleWaligaa Ha Iska Sii Deyn Gabadha, Haddii Ay Leedahay Tilmaamahaan
Next article“Waan ku guursanayaa ayuu igu yiri wuuna i khayaamay”
Qoys Soomaali ah oo xabsi lagu xukumay kadib markii sirtooda laga...
5 little things you can do to make a guy miss...